Ciidamo ka Socda Dalka Eritrea oo Muqdisho Kusoo Wajahan | Keydmedia
20 September 2020 RW Rooble oo Xildhibaanno la kulmay
Ciidamo ka Socda Dalka Eritrea oo Muqdisho Kusoo Wajahan
Xukuumadda Farmaajo oo la tuhunsan yahay in heshiis buuxa ay la gashay dawladda Eritrea oo ah tababarka ciidanka ayaa haatan waxaa soo shaac baxday in Eritrea ay ciidan fara badan usoo direyso Soomaaliya taas oo walaac ku abuurtay beesha caalamka, sida Keydmedia Online ay ogaatay.
NAIROBI, Kenya - Ciidan fara badan ayaa ku soo wajahan Soomaaliya oo ka socda dalka Eritrea, oo soo dhex mari doona Itoobiya, sidaas waxaa qaba diblomaasiyiin iyo xubna ka tirsan Beesha Caalamka oo fadhigoodu yahay Nairobi. Sida la xaqiijiyay, ciidankan ayaa u socda in ay xakameeyaan kacdoonka la is leeyahay waa uu ka dhici karaa Soomaaliya hadii la waayo doorasho xal u hesha xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee ka jirta Soomaaliya.
Ciidanka ayaa ku hubeysan gaadiid dagaal iyo hub culus, waxayna ku labisan yihiin tuutaha ama dharka astaanta u ah ciidanka Itoobiya. Goobaha la filayo in ay ka hawlgalaan waxaa ka mid ah magaalooyinka Dhuusamareeb, Baydhabo, Muqdisho iyo Jowhar, sida Keydmedia Online ay ka ogaatay diblomaasiyiin fadhigoodu yahay Nairobi.
Diblomaasiiyin ka tirsan dawladaha aadka u daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay, kuwaas oo ku tilmaamay sharci daro iyo in imaanshaha ciidankan uu dhaliyo xadgudub ama tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Keydmedia Online waxay isku dayday in ay la xiriirto dawladda Soomaaliya, balse ma jiraan wax jawaab ah oo ay xukuumaddu ka bixisay ciidankan.
Ciidamaha shisheeye ee haatan ku sugan Soomaaliya ayaa ku joogga ruqsad sharci ah oo kasoo baxday Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowr jeer booqashooyin ku gaaray dalka Eritrea halkaas oo la aaminsan yahay in uu ka helay dhigiisa taageero siyaasadeed iyo mid ciidan.
Beesha Caalamka ayaa mowqifyo adag ka soo saarayay halka ay ka taagan yihiin Madaxtooyada iyo Golaha Shacabka kadib markii xilka laga tuuray RW hore Xasan Kheyre, taas oo beesha caalamka ay ku sifeysay in ay aheyd mid aan loo marin waddo sharciga waafaqsan.
Wixii kale oo soo kordha, kala soco KON.
Villa Soomaaliya ayaa ka shaqeynaysa qorshe cusub oo la doonayo in Gollaha Shacabka ku siiyaan codka kalsoonida Rooble, oo maalmo kahor xilka uu Farmaajo u magacaabey.